Sakoroka teo ampizarana lay misy ody moka
jeudi, 05 novembre 2015 09:05
Sambava : Doro trano no saika niafaran’ny fizarana lay misy ody moka
Nisavorovoro omaly ny tao Antanifotsy II sy Antaimby, tao Sambava tampon-tanàna, nandritra ny fizarana lay misy ody moka. Mitaraina ny olona tokony hisitraka (ahazo) izany lay misy ody moka izany, fa lany fotoana avezivezy sy milahatra manontolo andro nefa olon-kafa tsy fantatry ny ao amin’ny Fokontany indray no mahazo.
mardi, 03 novembre 2015 07:29
Mahajanga : Nahazo tobi-pahasalamana mitsabo ny aretina sempotsempotra sy mangidihidy
Notokanana ny sabotsy ny 31 okotobra 2015 ny tobi-pahasalamana tsy miankina iray mitsabo manokana ny aretina sempotsempotra sy mangidihidy, izay vao naorina ao amin’ny Fokontany Ambondrona, kaominina Mahajanga. Faliavanja. Izay no anarana nampitondraina ity tobi-pahasalamana ity. Ny 24 jolay 2012 no nahazoany ny fahazoan-dàlana hiorina ao Mahajanga. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny Fondation malagasy Ali Mirode sy ny fikambanana France-Majunga Faliavanja, izay tarihin’ny Dr Jean Pol Dumur, no nahavitana ny fotodrafitr’asa. Ny sandam-pizahana ny marary dia arakarakan’ny fahafahan’ny tsirairay ary ny fanafody rehetra mifanaraka amin’ny aretina dia omena maimaimpoana. Hatreto dia ao Mahajanga ihany no ahitana tobi-pahasalamana tsy miankina toy itony, manampy ny Malagasy amin’ny fitsaboana maimaimpoana toy izao, ka efa fanoitra lehibe ho an’ny fampandrosoana ny mponina izany hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar nankasitraka ny mpanorina. Mpitsabo malagasy miisa roa sy mpitsabo mpanampy roa, izay Malagasy sy mpilatsaka antsitra-po avy amin’ireo firenena miteny frantsay no misahana ny fitsaboana ny tobim-pahasalamana. Mandray mpianatra ho dokotera taona faha fito hanatanteraka fiofanana ity tobi-pahasalamana ity ary miara-miasa amin’ny oniversiten’i Mahajanga sy ny Sampandraharaham-paritry ny Fahasalamam-bahoaka ary ny Sampandraharaham-paritry Mponina ao an-toerana.
lundi, 02 novembre 2015 15:31
Halatra fiara : 4x4 very tao Mahajanga hita tany anaty alan'Amboromalandy
Hamoaka fiara maraina ilay Karana tompon'ilay 4x4 vao nahatsikaritra fa nisy nangalatra ny fiarany ny sabotsy teo. Nametraka fitarainana tany amin'ny polisy ilay Karana. Natao ny fikarohana. Olona tsara sitrapo no nandrenesana fisiana fiara mampiahiahy ao anaty ala any Amboromalandy. Rehefa nojerena dia ilay fiara 4x4 tokoa. Tsy nisy olona hita teo amin'ny manodidina ilay fiara.
Hetsika fanadiovana ny tanàna Ministeran'ny Serasera
samedi, 31 octobre 2015 07:29
Hetsika fanadiovana ny tanànan'Antananarivo sa hetsika politika?
Toy ny fanaony isan-taona dia nanatontosa ny hetsika fanadiovana ny tanàna ny tao amin'ny ministeran'ny serasera sy ireo ministera maromaro omaly zoma 30 oktobra raha nahemotra noho ny antony tsy nazava izany fotoana izany. Niavaka kely izy tamin'ity fa dia nisy filaharam-be notronin'ireo antoko politika samihafa, ny mpomba ny fitondrana no hita maro tamin'izany.
mercredi, 28 octobre 2015 20:05
Photo: Sobika Antsirabe
Vakinankaratra : Misedra fahasahiranana sahady vao nirotsaka nisesy ny orana
Nisesy ny orana tao Vakinankaratra tato anatin’ny herinandro izao. Faly ireo tantsaha mpamokatra saingy misedra olana sahady kosa ireo mpitatitra noho ny fahasimban’ny lalana mampifandray an’ireo Kaominina ambanivohitra amin’Antsirabe renivohitry ny Faritra toy ny lalan’ny Soanindrariny. Na ny ao tampon-tanànan'Antsirabe aza feno rano mihandrona ny lalana.
Tiko Andranomanelatra Antsirabe
samedi, 24 octobre 2015 19:00
Bokan'ny trosa ny Orina'asa Tiko Andranomanelatra Antsirabe, mbola voageja.
Mivoaka tsikelikely, milaza tsy nanontaniana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, raha nitsidika ny orin'asa Tiko any Andranomanelatra Antsirabe androany. Hita tamin'izany moa ny mbola mahavoageja ny taniny sy ny fananany amin'ny antoka izay nataony teo anivon'ny orin'asa mpampindram-bola SONAPAR mitentina 967 600 000 ariary, ary eo anivon'ny ARO mitentina 18 187 278 614,40 ariary. Mahatratra 19 miliara ariary mahery izany ny mbola fanagejana io orin'asa io ankoatran'ny trosa izay mbola ananan'ny fanjakana aminy amin'ny hetra tsy mbola voaloa, izay mihoatra ny 300 miliara fmg raha ny seho an-gazety hita tatoato. Hatreto moa dia tsy fantatra ny vola fanonerana takian'ny Tiko amin'ny fahapotehina nihatra taminy, sy ny tena mbola trosa ananan'ny fanjakana aminy. Fantatra fotsiny, raha nivahiny tamin'ny televizionina iray ny minisitry ny vola sy ny teti-bola dia nilaza fa tsy mifandray velively io resaka fanonerana io sy ny resaka fandoavan-ketra satria resaka politika no manapaka izany, fa ny fandoavana ny hetra sy ny haba dia tsy maintsy hefain'ny orin'asa iray, ka tsy misy fanalefahana azo atao amin'izany, na ho kaoty anaty amin'izany, fa ny fanamorana ny fandoavana azy tsikelikely hoy ihany izy no azo eritreretina sy hifampidinihana. Ny filoha teo aloha Ravalomanana moa dia nilaza androany fa efa nangataka fihaonana tamin'ny Filoha Rajaonarimampianina ny tenany, fa mbola tsy voaray hatreto. Kisary hisarihina ny mason'ny mpanara-baovao hatrany ve ity atao ity, raha niseho teny Andohatapena andro vitsy izay, dia tety Andranomanelatra indray androany, dia azo antoka fa ho any Vodiala Ambatondrazaka ihany koa tsy ho ela, ary ireo orin'asa maro n'ny SINPA sy Somacodis ary Salsa izay lasa n'ny TIKO varoboba ihany koa. Ity tany 18Ha eto Andranomanelatra Antsirabe moa raha ny taratasy naseho androany dia mitentina 41 500 000 fmg no nividianana azy tamin'ny taona 2000.
vendredi, 23 octobre 2015 15:13
Hetsika Fahalemana : Maty mosary ny miaramila ?
Velon-taraina ireo vady aman-janak’ireo mpitandro filaminana mandray anjara amin’ny hetsika Fahalemena any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy ankehitriny. Ireo miaramila moa amin’izay maha « grande muette » azy izay dia tsy hitaraina amin’ny mpanao gazety mihitsy fa ny andefomandrin’izy ireo kosa no tsy mahatanty. Nisy vadina zandary iray ary nitantara fa tsy mahazo « indemnité » akory, ireny mpitandro ny filaminana lasa manenjika dahalo ireny. Misy amin’izy ireo efa lany ny sakafo izay nataony vatsy ka toy ny vadin’ity ramatoa izay nivoaka tamin’ny fahanginany ity dia efa hatramin’ny alahady no tsy nananko-hanina ny vadiny. « Tena mankaleo sy mahasosotra ny mieritreritra ny fahorian’izy ireo any am-pandehana any kanefa ilay Praiminisitra iny aty dedaka sy matikambo ery milaza fa miasa tsara ny fanjakana manenjika ny dahalo. Ny mahazo ny vadinay tsy misy hanin-ko hanina any tsy eritreretiny » hoy ity vadina zandary iray ity.
vendredi, 23 octobre 2015 12:35
Tokanono : Andrasana androany ao amin’ny fitsaran’i Betroka
Androany no tokony hiakatra fitsarana ao amin’ny tribonalin’i Betroka i Tokanono, ilay ombiasy nitana ny fanafodin’i Remenabila ilay dahalo raindahiny nampahory ny faritra atsimon’ny nosy iny tamin’ny taona 2009 sy 2010. Firaisana tsikombakomba tamin’i Remenabila sy ny namany no fiampangana miandry an’i Tokanono ka izay no antony nitadiavan’ny Kolonely Lylyson de Roland azy nandritra ny hetsika tandroka .
Solombavambahoaka Lylyette René de Roland
jeudi, 22 octobre 2015 14:29
Niharan-doza ny Solombavambahoaka Lylyette René de Roland
Niharan-doza ny maraina teo ny fiaran’i ramatoa Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Befandriana avaratra, Lylyette René de Roland. Tapaka hidy kodiaran'ny fiarany rehefa izy handeha hody avy namonjy ny fivoriana ara-potoana teny amin’ny Antenieram-pirenena.
jeudi, 22 octobre 2015 14:08
Lalam-pirenena faha-4 : Afa-pahasahiranana ny mpampiasa lalana
Notokanana androany alakamisy 22 oktobra ny fahavitan'ny asa fanamboarana ny tetezan'i Betsiboka sy ny fanatsarana ny lalam-pirenena faha-4. Napetraka androany ihany koa ny vato fototra mariky ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny tetezan'i Kamoro.